नेताको सामाजिक मोल | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / नेताको सामाजिक मोल
नेताको सामाजिक मोल
Posted by: युगबोध in विचार October 23, 2018	0 152 Views
ने कपाका ने ता वामदे व गौ तमलाई संघीय संसदको सदस् य अर्थात माननीय सदस् य (सांसद) हुने तीब्र इच्छा थियो र छ । उनले बर्दियाबाट चुनावमा प्रतिस् पर्धा गरे र लडे  । लडे माने हारे  । तर उनले हार्न माने नन् । भने – पार्टीभित्रै बाट अन्तर्घात भयो र म हार्न पुगे ं । अर्थात उनी हारे का हो इनन् स्थानीय पार्टीले हरायो  । स् थानीय पार्टीले हराएको क्षतिपूर्ति पार्टीका के न्द्रीय ने ताले गरिदिनुपनेर् भयो  ।
बर्दियामा वामदे व चुनाव लडे को क्षे त्रमा स् थानीय ने कपा पार्टीले हराउन लाग्यो भन्ने त लाग्दै न । तर जिताउन लाग्नुपनेर् जति लागे न भन्ने सुने को छु । त्यसको कारण स् थानीय पार्टी कार्यकर्ताभन्दा वामदे व बढी दो षी थिए भन्छन् जानकारहरु । वामदे वमा एउटा विशिष्ट गुण छ उनी झिनामसिना कुरामा उति ध्यान दिदै नन् । उनलाई जे पनि ठूलो मनपर्छ । पार्टीमा पद ठूलो , राज्यको पद ठूलो , कार्यकर्ता पनि काठमाडांै के न्द्रित ठूलो घरमा बस् ने , ठूलो गाडी चढ्ने , ठूलो आम्दानी भएका, ठूलो चन्दा दिन सक्ने  । त्यसै ले आफ्नो चुनाव प्रचारका लागि यस् तै –यस् तै विशे षता भएका ठूला कार्यकर्ता ठूला ठाउ“बाट लिएर गएका वामदे वले बर्दियाको चुनाव क्षे त्रमा संगठन निर्माणमा लागे का, त्यहा“को विकास निर्माणस“ग सरो कार भएका झिनामसिना कार्यकर्ताको कुरा उनले सुने नन् । जसरी पनि वामदे वलाई जिताउने , जति खर्च लागे पनि खर्च गनेर् विश्वास पात्र समूह काठमाडांै बाट लिएर गएको र वामदे वले तिनै को यो जनाअनुसार आपूm चल्ने बताएपछि स् थानीय ने कपा कार्यकर्ता निरीह बने का थिए । काठमाडांै बाट वामदे वलाई जसरी पनि जिताउन गएकाहरु ठूला हो टलमा बस् ने , खर्चालु जीवनशै लीका, महंगा गाडीमा शयर गनेर् हरुको स् थानीय मतदातास“ग मन जो डिने कुरै भएन । मन जो डिएकाहरुको कुरै सुनिएन । त्यसै ले दे शव्यापीरुपमा ने कपाको पक्षमा अभूतपूर्व लहर आउ“दा पनि बर्दियाका मतदाताले वामदे वलाई रुचाएनन् ।
वामदे व परीक्षण हुन बा“की ने ता थिएनन् र हो इनन् । उनी प्रमुख भएको पार्टीले विगतमा एकसिट पनि जिते न । त्यसै ले हतारिएर मातृ पार्टीमा फर्किए सिपी मै नालीलाई छाडे र । उनी पटक–पटक गृहमन्त्री हु“दा दे शमा के –के मौ लायो र ककसले फाइदा लिए चुहिएर आएकै ले धे रै अघाएका छन् । सबै दे खे का भए त के –के हुन्थ्यो हो ला । उनी ने कपाको उपल्लो तहका ने ता हु“दै हुन् । उनी हर्ताकर्ता भएको पार्टी सरकारमा छ । दे श विकासका लागि उनको भुमिका अहिले को स् थानबाट हुन नसक्ने भन्ने कुरा हु“दै न । तर वामदे वलाई सांसद नै हुनुपनेर् , आपै m महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पुग्नुपनेर् हतारो बुझिनसक्नु छ ।
पे mरि पनि वामदे व कुनै महत्व नभएका ने ता हो इनन् । उनी महत्वपूर्ण ने ता हुन् । उनको महत्व बनाउनमा हो इन बिगार्नमा काम लाग्छ । पञ्चायत बिगार्नमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो  । त्यसका लागि पञ्चायतको विपक्षमा हुने हामीजस् ता थुप्रै ले उनलाई आभारसहित धन्यवाद दिनै पर्छ । कुनै समयमा दे शको आशा र भरो शाको के न्द्र बन्दै गएको तत्कालीन ने कमा एमाले बिगार्नमा उहा“को ठूलो यो गदान छ । त्यसै ले त्यो समयका एमाले विरो धी धे रै ले उहा“लाई आभारसहित धन्यवाद दिएका छन् । अरु के –के दिए हो ला त्यो प्रमाणित छै न । खुमबहादुरले भने को सम्म मात्रै हो  । पार्टी भित्रको सन्तुलनमा जो ड घटाउ गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् वामदे व । किनकि उनलाई ‘दे व’ मान्ने समूह ने कपाभित्र छ र त्यसले सन्तुलनमा तलमाथि पार्न सक्छ । जसरी खुमबहादुरले ने पाली कांग्रे स पार्टीभित्रको सन्तुलन तलमाथि पार्ने क्षमता राख्थे  । यो सन्तुलनको तराजुआफ्नो हातमा बो के र बसे का खुमबहादुरको सबै शर्त स् वीकारे र आफ्नो पक्षमा पानेर् ने ता नै पार्टीको ने ता हुने गरे को इतिहास कांग्रे समा थियो  ।
अहिले वामदे वको प्रभाव ने कपाभित्र उस्तै –उस्तै हो  । उनलाई खुशी नपार्दा पार्टी धरापमा पर्न सक्छ र ने ता पनि । त्यसै ले उनलाई खुशी पानेर् प्रयास ने ताहरुले गरे को दे खिन्छ । प्रभावशाली मन्त्री बन्न सांसद हुने वामदे वको जिद्दी असान्दर्भिक छ, जनमत विपरीत छ, पार्टीको साख बिरुद्ध छ भन्ने ने कपाका वर्तमान अध्यक्षद्वय र पूर्वअध्यक्षद्वयलाई राम्ररी थाहा छ । तर उनीहरु को ही पनि वामदे वको विरुद्धमा जान सक्दै नन् । किनकि वामदे वले सन्तुलन बिगारिदिन सक्छन् । वामदे वले चारै जना ने तालाई पटक–पटक भे टे र भने को हुनुपर्र्छ ‘खै मलाई सांसद किन नबनाएको ? कहिले मन्त्री बनाउने ? यत्तिकै टानेर् हो ? दे खाइदिउ“ ?’ आदि आदि । वामदे वले थर्काए, ने ताहरु थर्किए । किनकि ने ताहरुलाई थाहा छ वामदे वले बनाउन नसके पनि बिगार्न सक्छन् ।
वामदे वलाई सरकारको प्रभावशाली मन्त्री बनाउ“दा त्यसबाट फाइदा लिने समूह त वामदे वलाई मरिमे टे र मन्त्री सांसद बनाउन नलाग्ने कुरै भएन । तिनै ले खो जे ले नदे नका हनुमान सांसद । जसले वामदे वका लागि ठाउ“ खाली गरिदिन मञ्जुर गरे  । पार्टीभित्रको ले नदे नमा वामदे वको पनि आशीर्वाद चाहिने हरु चुपचाप पार्टीको लो कप्रियता घटे को हे रे र बस् ने गर्छन् । तर पार्टीको ले नदे नमा सहभागी नभएका, पार्टीको पक्षमा लागे का पार्टीप्रति आशा भरो शा गरे का, दे शमा थिति विधि नबिग्रियो स् भने र चाहने दे शका शुभचिन्तकले वामदे वको अति महत्वकांक्षाको खुले र बिरो ध गरे  । चार ने तालाई वामदे वलाई जसरी पनि जनमतको उपहास गदैर् सांसद बनाउनुको कारण पुष्टि गर्न चुनौ ती दिए । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा वामदे वको महत्वकांक्षाको खुले र विरो ध भयो  । वामदे वको उत्साह चार दिन पनि टिके न । उनी आपै m पछि हट्ने संके त गरे  । यसले चार ने तालाई अवश्य के ही राहत भएको हुनुपर्छ ।
दे शमा लो कतान्त्रिक पद्धति नभएको भए अहिले वामदे वको दे वत्वकरण गरिने थियो र उनको महत्वकांक्षाको मूल्य दे श र जनताले तिर्नुपनेर् थियो  । एकपटक सत्ताको सिढीमा उक्लिएको व्यक्तिलाईआप्mनो लो कप्रियता घटे को पत्तै नहुने रहे छ । लो कतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा सर्वसम्मत ने ता को ही पनि हुदै न ।
शक्ति र सत्तामा पुगे का जो सुकै को विरो ध हुन्छ । विरो धले व्यक्तिलाई र संस्थालाई सन्तुलनमा राख्छ र गलत गर्नबाट जो गाउछ । शक्तिमा पुगे को जो सुकै का वरिपरि दुई प्रकारका मानिसहरु सधै सक्रिय हुन्छन् । एक प्रकारका मानिस मूल ने तृत्वलाई सहयो ग गर्न, सघाउन, सफल पार्न, उद्दे श्यमा, लक्षमा पु¥याउन सधै सक्रिय हुन्छन् । यिनीहरुमा वाद हुन्छ, मूल्य हुन्छ, विचार हुन्छ, उद्दे श्य लो कहित र जनहितको हुन्छ । मूल ने तृत्वलाई हानि हुने गरी जानीजानी कुनै गलत काम गर्र्दै नन् । जब मूल ने तृत्वले बै धानिकता गुमाउ“छ तब यस् ता मानिस ने तृत्वसगै बाहिरिन्छन् ।
अकोर् एक खालका मानिस हुन्छन् तिनको उद्दे श्य लो क हित हु“दै हो इन । यस् ता मानिसको कुनै वाद हु“दै न । मूल्य हु“दै न । सिद्धान्त ह“ुदै न । के वल स् वार्थ हुन्छ । आप्mनो व्यक्तिगत स् वार्थ पूरा गर्न चाकडी, चाप्लुसी, लगानी, प्रशंसा, उपहार यस् ता मानिसको साधन हो  । यो साधनको खुब प्रयो ग गर्छन् । आवरणमा वादको ले पन हुनसक्छ । वास् तवमा यस् ता मानिस आप्mनो स् वार्थ पूरा गर्न सधै चलायमान हुन्छन् । मूल ने तृत्वलाई करमा, अभरमा, लो भमा, भ्रममा पारे र भएपनि आप्mनो स् वार्थ सिद्ध गर्नु यस् ता मानिसको उद्दे श्य हुन्छ र उद्दे श्य पूरा गर्न सक्रिय हुन्छन् । यस् ता मानिस पनि पार्टी, ने ताको कहिले भित्रै बसे र कहिले सके सम्म नजिक बसे र काम गरिरहन्छन् ।
आप्mनो नजिकका मानिस चिन्नु ने ताको विशिष्ट गुण हो  । यो गुण सबै ने तामा हुन्छ नै भन्ने छै न ।ने तामा हुने विशिष्ट गुणमध्ये कै गुण हो आप्mनो उद्दे श्यमा नजिक र टाढाका मानिस चिन्नु, मानिसको क्षमताको पहिचान गर्नु,आप्mनो आलो चना सुन्नु र आलो चनाको स् तर छुट्याउनु । सुने को छु भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहरलाल ने हरु हरे क दिनको पत्रिकामा बिहानै आप्mनो आलो चनागरिएको कार्टुन र आलो चना गरिएका ले खको शीर्षक हे थेर्  । आप्mनो आलो चना नगरिएको दिन उनी खिन्न हुन्थे रे  । उनी १८ वर्ष भारतका लो कप्रिय प्रधानमन्त्री बन्न सके  । अर्थात आजीवन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनिरहे  ।
पार्टीमा अकोर् एकखालका मानिस हुन्छन् । तिनलाई पार्टीमा लाग्नु भने को सधै ं आपूmले रो जे को , चिताएको ठाउ“मा बसिरहनु हो  । एक पटक पुगे को ठाउ“भन्दा तल कहिल्यै नआउनु हो  । अझ घुमिफिरी लाभको पदमा सधै बसिरहन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यस् ता मानिस आपूmले सधै त्याग मात्रै गरे को डिंग हा“क्छन् । आपूmले के ही नपाएको गुनासो गर्छन् । आपूm अति नै प्रभावशाली, क्षमतावान, विशिष्ट को टीको भएको भ्रममा हुन्छन् । यस् ता स् वभावका मानिस आपूmलाई प्रभावशाली बनाउन, दे खाउन आपूmस“ग चरित्र मिल्ने हरुको झुण्ड बनाउ“छन् र सधै ं मो लमो लाइ गरिरहन्छन् । यस् ता मानिसलाई वाद, विचार, मूल्य, सिद्धान्त, लो कहितस“ग कुनै सरो कार नभएका मानिसले चा“डै प्रभावित गर्न सक्छन् । यो स् वभाव हो , चरित्र हो , व्यक्तिको मूल्य र दर्शन हो  । उनीहरुलाई यही ठीक लाग्छ । यस् तो स् वभाव अर्थात चरित्र, चिन्तन गाउ“, टो ल, वडा, नगर, जिल्ला, प्रदे श र दे शको उपल्लो तहसम्म नै हुन सक्छ । यो चरित्रलाई के ही मानिसले आप्mनो पहु“च अनुसार बो के का हुन्छन् । आपूm जुन स् तरमा छन् त्यही स् तरको प्रभाव पानेर् गर्छन् । मे रो बुझाइमा वामदे व यो को टीका राष्ट्रियस् तरका ने ता हुन् । हाम्रो दे शमा जुन प्रकारको राजनीतिक गतिविधि छ, समाजमा जस् तो राजनीतिको प्रभाव छ त्यहा“ यस् ता मानिस निकै हावी हुन सक्छन् ।
समाजमा अकोर् एउटा उज्यालो पाटो पनि दे खिदै छ । दे श यस् तै –यस् तै ने ताको कारण बन्न नसके को , बे थिति मौ लाएको , भ्रष्टहरु दण्डित हुनु नपरे को , इमानदारहरु मूलधारमा प्रभावी बन्न नसके को , विधिको शासन स् थापित हुन नसके को , न्याय निम्छरो भएको , उद्यमशीलताको विकास हुन नसके र दे श गरिव भएको , वे रो जगारी बढे को रहे छ भन्ने बो ध अहिले का युवालाई हुन थाले को छ । हुन त युवामा पनि सकारात्मकभन्दा नकारात्मकता बढी नै पाइन्छ । तर यो पनि सुधार हुन्छ, हुनुपर्छ । यो समुदायमा दे शमा थितिविधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हरु जबर्जस् तरुपमा प्रभावी बन्दै छन् । प्रविधिले उनीहरुलाई आप्mनो विचार राख्ने अवसर दिएको छ । यो एक सशक्त आवाज बन्दै छ । यसले मानिसमा विगत र वर्तमानमा भएको उनको पदको कारण राजनीतिक मूल्य त दे खिएला तर सामाजिक मूल्य सकिएको हुन्छ । यस्तो सामाजिक मूल्य सिद्धिएकाहरु पनि के ही समय राजनीतिक ने ता हुन सक्छन् । जनअनो मो दित हुन धे रै मुस् िकल छ । त्यसै ले जनअनुमो दित हुन राजनीतिक मो लमात्रै पर्याप्त छै न सामाजिक मो लको पनि आवश्यकता पर्छ । के ही ने ताहरुको राजनीतिक मो ल अहिले पनि निकै उच्च दे खिन्छ तर सामाजिक मो ल सिद्धिएको तिनले चालै पाएनन् । आगे ने ताहरुको जो विचार ।
Previous: महिनावारी रोकेर पूजा गर्नु गलत
Next: विकृति रोक्ने तदारुकता